OneSignal: Manampia Fampandrenesana Push amin'ny Desktop, App, na Email | Martech Zone
Isam-bolana dia mahazo mpitsidika an'arivony an'arivony aho amin'ny alàlan'ny fampandrenesana fanindriana browser izay nampidirinay. Mampalahelo fa mihidy izao ilay sehatra nofidianay ka tsy maintsy nitady iray vaovao aho. Mbola ratsy kokoa aza, tsy misy fomba fanafarana ireo mpamaky taloha ireo hiverina amin'ny tranokalanay, ka hamely isika. Noho izany antony izany dia nila nisafidy sehatra iray fanta-daza sy azo refesina aho. Ary hitako io OneSignal.
Tsy vitan'ny hoe OneSignal manaova fampandrenesana fanosehana ho an'ny mpizaha, izy ireo koa fivarotana tokana handefasana fampandrenesana amin'ny alàlan'ny rindranasa finday na amin'ny mailaka ihany koa.
Inona no atao hoe fampandrenesana Push?
Ny ankamaroan'ny marketing nomerika dia mampiasa Sintony teknolojia, izany ny mpampiasa dia manao fangatahana ary ny rafitra dia mamaly amin'ny hafatra angatahina. Ohatra iray mety ny pejy fitobiana izay angatahan'ny mpampiasa fampidinana. Raha vao mandefa ilay taratasy ny mpampiasa dia alefa amin'izy ireo ny mailaka miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny fisintomana. Ilaina izany, saingy mitaky ny fihetsiky ny fanantenana. Ny fampandrenesana Push dia fomba mifototra amin'ny fahazoan-dàlana ahafahan'ny mpivarotra manomboka ny fangatahana.
Ireto misy ohatra vitsivitsy amin'ny fampandrenesana fanosehana:
Fampandrenesana Push Desktop - ny mpanamory maoderina manolotra ny fotoana mety hanoto fampandrenesana. Eto amin'ity tranokala ity, ohatra, dia misy mpitsidika voalohany anontaniana raha afaka mandefa fampandrenesana fanosehana amin'izy ireo izahay. Raha eken'izy ireo izany, isaky ny mamoaka lahatsoratra vaovao izahay dia mahazo fampandrenesana amin'ny birao.
Fampandrenesana finday handrisika ny finday - Ny rindranasa finday dia afaka mampandre ireo mpampiasa finday amin'ny alàlan'ny fampandrenesana fanosehana. Rindrambaiko finday iray tena tiako ny mampiasa azy Wiktionary, satria mamaky ny kalandrie ary mampahafantatra ahy - mifototra amin'ny fifamoivoizana - rehefa mila miala aho mba ho tonga ara-potoana amin'ny fivoriana manaraka.
Fampandrenesana handroaka ny mailaka voafitaka - raha manafatra amin'ny Apple ianao dia mahazo fampandrenesana mailaka manosika izay hampahafantatra anao rehefa nofonosina ny kaomandinao ary rehefa eo amin'ny lalana mankany amin'ny toerana halehany izany.
OneSignal dia manolotra fisehoan-javatra mampino sasany ankoatry ny safidy cross-platform sy ny vidiny mahery setra:
Fampiomanana minitra 15 - Ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa dia milaza fa tsy afaka mino ny fomba nanombohany izy ireo.
Fanarahana ny fotoana tena izy - Araho amin'ny fotoana tena izy ny fiovan'ny fampandrenesanao sy ny mailakao.
Scalable - Mpampiasa an-tapitrisany? Voasarontsika daholo izy ireo. Manohana ny ankamaroan'ny fitaovana sy SDK lehibe rehetra izahay.
Hafatra fitsapana A / B - Mandefasa hafatra fanandramana roa amin'ny ampahan'ny mpampiasa, avy eo alefaso ny iray hafa ho tsara kokoa.
Fikendrena fizarana - Mamorona fampandrenesana manokana sy mailaka ary alefaso amin'ny mpampiasa tsirairay amin'ny fotoana mety indrindra amin'ny antoandro.
Fanaterana mandeha ho azy - Apetraho dia hadinoy. Mandefasa fampandrenesana mandeha ho azy ho an'ireo mpampiasa.
Ho fanampin'ny API matanjaka, WordPress plugin, ary kitam-pampandrosoana rindrambaiko (SDKs) hampidirina mora foana, OneSignal dia manolotra mpamatsy mpampiasa lehibe ho an'ireo mpivarotra handefa fampandrenesana fanosehana ho azy ireo ihany koa. Izy ireo koa dia manolotra ny fampidirana boaty amin'ny SquareSpace, Joomla, Blogger, Drupal, Weebly, Wix, Magento, ary Shopify.
Midira maimaim-poana ao amin'ny OneSignal
Tags: ab fampandrenesana fanerena abBilaogerafampandrenesana amin'ny browserfampandrenesana manindry sehatra hafafampandrenesana amin'ny biraodrupalJoomlamagentofampandrenesana amin'ny findayfampandrenesana foibeonesignalmanosika apifampandrenesana manosikamanery fampandrenesana apitsindrio plugin fampandrenesanafanaraha-maso ny fotoana tena izyfampandrenesana safarifampandrenesana fanenjehana azo refesinafampandrenesana fanindriana segondrashopifysquarespacemailaka naterakafampandrenesana amin'ny tranonkalaweeblyWixplugin WordPress
People.ai: hamaha ny herin'ny fahiratan-tsaina artifisialy ho an'ny ekipa mpivarotra, marketing, ary fahombiazan'ny mpanjifa